တရားမဝင် အရက် သောက်သုံးမှုကြောင့် အိန္ဒိယ အရှေ့ပိုင်းတွင် အနည်းဆုံး လူ ၁၃ ဦး သေဆုံး
လူနာခြောက်ယောက်ကိုသတ်ပြီး မြှုပ်နှံဖျောက်ဖျက်ထားသည့် ဆရာဝန်ကို အိန္ဒိယရဲကဖမ်းဆီးရမိ
ငွေကြေးခဝါချမှု တချို့ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပေမဲ့ အများကြီး ကျန်နေသေး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ရက်၁၀၀ အတွင်း ဆောင်ရွက်တဲ့ စီမံကိန်းတွေ ထဲမှာ ငွေကြေး ခဝါချမှု လုပ်ငန်းတွေကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်မှုလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ NLD အစိုးရရဲ့ ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်း အတွင်း ဗဟိုဘဏ်က စိစစ်ခိုင်းထားတဲ့ ငွေကြေး ခဝါချမှု အမှုပေါင်း ၃၉ မှုကို စိစစ်ခဲ့ပြီး ၂၉ မှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်က စိစစ်ခိုင်းထားတဲ့ အ
တရားဥပဒေ စိုးမိုးနိုင်ရေး၊ မှုခင်းကျဆင်းရေးတို့တွေအတွက် ပြည်သူ့ရဲတွေအနေနဲ့ ဒီထက်ပိုထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လို အပ်နေသေး တယ်လို့ ဒီကနေ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုကိုမတိုက်ဖျက်နိုင်သေးသမျှ မူခင်းကျဆင်းဖို့လုပ်ဆောင်မှုဟာ ထိရောက် နိုင်မှာ မဟုတ်တာကြောင့် ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖို့ တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ ဒီပြင် သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အမြင့်
မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို တွေ့ရစဉ်။ Photo: Myo Zaw Ko/RFA ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင် ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဟာ မေခနဲ့ မလိခမြစ် ပေါင်းဆုံတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံနဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဧရိယာထဲကို ဒီနေ့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံကမ်းနားမှာ ဆိုင်တွေစနစ်တကျ ဆောက်လုပ်ဖို့၊ ကမ်းနားလမ်းဆောက်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေ ညွှန်ကြားသွားပြီးနောက် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဧရိယာထဲကို သွားလေ့လာတာဖြစ်တ
P0sted on 17August 2016 ဗီရက်နမ် နိုင်ငံ ဒါလပ် Da Latမြို့ က Xuan Huong Lake ရေကန်ကြီး နဘေးမှာ Pokémon GO.ဂိမ်း ကိုဖုန်းနဲ့ မဲကစားနေတဲ့ မိခင်တစ်ဦးဟာ ရေကန်မှာ လေပြင်းတွေ တိုက် လာပြီး သူမ ခလေး ရေကန်ထဲ လွှင့်ကျသွားတာကို မသိလိုက်လို့နဘေးက မြင်တွေ့ ရတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့် ခ၇ီးသည်တွေက ခလေးကို ၀ိုင်းကယ်တင်ပေးခဲ့ရကြောင်း ဗီရက်နမ်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း သတင်းမှာ ဖေါ်ပြ ထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရဲတွေ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ပြည်သူအများစုဆင်းရဲနွမ်းပါး၍ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါနေချိန် ပြည်သူများအနေဖြင့် ဗိုက်တာမင် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သော ခွေးသားကို ပိုမိုစားသုံးကြရန် အစိုးရက တိုက်တွန်းထားသည်။ အာဏာရှင်ကင်ဂျုံအန်းခေါင်းဆောင်သော မြောက်ကိုရီယားအစိုးရက ခွေးသားသည် ကြက်သား၊ ၀က်သား၊ အမဲသား၊ ဘဲသားတို့ထက် ဗိုက်တာမင် ပိုမိုကြွယ်ဝကြောင်း၊ စားသုံးသူကို သက်လုံကောင်းစေကြောင်းဖြင့် ခွေးသားပရိုမိုးရှင်း ပြုလုပ်လျက်ရှိ
ပေကျင်း သြဂုတ် ၁၇ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာလီခချန်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်ရန် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာရာ ကူမင်း လေဆိပ်မှ တစ်ဆင့် ပေကျင်းမြို့သို့ ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ရောက် ရှိကြသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ကူမင်းမြို့မှ တစ်ဆင့် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာပြီးနောက် ပေကျင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၉း၅၅ နာရီတွင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Liu Zhen ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သ
ဓါတ်ပုံ - Ko Lu Pyo ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့ နယ် ရေကျော်ကြီးကျေးရွာမှာ ဖခင်ဖြစ်သူကို သားအရင်းက တုတ်ချောင်းနဲ့ ရိုက်သတ်မှု ယနေ့ သြဂုတ်လ (၁၇)ရက်ေ်န့ မနက် ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့် က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ရေကျော်ကြီးကျေးရွာနေ သေဆုံးသူဦးသောင်းအေး (၆၂)နှစ်ကို သားအရင်းဖြစ်သူ ပိုင်စိုး (၂၈)နှစ်က ဖခင်ဖြစ်သူ ထမင်းစားနေစဉ် အနောက်မှ ၄×၂သုံးပေခန့် အရှည်ရှိ တုတ်ချောင်းနဲ့ ရိုက်သတ်လိုက်ရာ ဦးသော
Posted: 17 Aug 2016 06:20 AM PDT
မင်းလှခံတပ်အားတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ -- အင်တာနက်) ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ၊ အထက်မင်းလှမြို့ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်း နဖူးပေါ်၌ တည်ရှိသည့် မင်းလှခံတပ်သည် နှစ်စဉ် ရေတိုက်စား မှုကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၇၀ ကျော်ခန့်က ခံတပ်ကြီး ၏ ရှေ့ပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ အချို့ ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ ရပြီး ယခုနှစ်တွင် ရေကြီးရေလျှံပြီး ဧရာဝတီမြစ်ရေ တိုက်စားမှုကြောင့် ခံတပ်ကြီး၏ အောက်ခံမြေသား များအတွ
မလေးရှား ဆီတင်သင်္ဘော MT Vier Harmoni အားတွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ-အင်တာနက်) ကွာလာလမ်ပူ၊ သြဂုတ် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဆီတင်သင်္ဘောတစ်စီးသည် မလေးရှားဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာလာပြီးနောက် ပြန်ပေးဆွဲခံရသည်ဟု ယုံကြည်ရကြောင်း အာဏာပိုင်များက သြဂုတ် ၁၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အေဂျင်စီက သြဂုတ် ၁၆ ရက် နေ့လည်ပိုင်းကတည်းက ဆီတင်သင်္ဘော MT Vier Harmoni ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတ
မစ္စတာ တေးယောင်ဟို (ယာ) တောင်ကိုရီးယားကို ရောက်နေပြီဆိုတာ အတည်ပြုနိုင်။ လန်ဒန်မြို့မှာ တာဝန်ကျတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ထိပ်တန်း သံတမန် တစ်ယောက်ဟာ တောင်ကိုရီးယားကို ဘက်ပြောင်း ခိုလှုံခဲ့တယ်လို့ ဆိုးလ်မြို့က အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ မစ္စတာ တေးယောင်ဟို နဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစုကို တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက စောင့်ရှောက် ထားတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ မစ္စတာ တေးဟာ လန်ဒန်မြို့က မြောက်ကိုရီးယား
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးညိုမြို့နယ်၊ စံပယ်မြှောင်အုပ်စု၊ စိန်တိုင်ကျေးရွာတွင် သြဂုတ် ၁၆ ရက်၊ ညပိုင်းက လေ ဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၂၆ လုံးပျက်စီးကာ လူ ခြောက် ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။ နေအိမ်များပျက်စီးသွားသည့်နေရာများသို့ မိုညိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ မီးသတ်၊ ကြက်ခြေနီ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များမှာ သြဂုတ် ၁၇ ရက်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ
တရားမ၀င် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု တားဆီးရေးစီမံချက်အကြောင်း သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် ရှင်းလင်းပြောကြားနေစဉ်။Photo: Win Ko Ko Latt/ RFA Mobile Team လို့ခေါ်တဲ့ တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှု တားဆီးထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ တရားမ၀င် ကုန်သွယ်မှုတွေ များလာတယ်လို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ဒီကနေ့အမျိုးသားလွှ
နိရဉ္စရာ၊ သြဂုတ် ၁၇ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် မယူကမ်း မီးညိုထောင့်ကျေးရွာတွင် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်ခံရ၍ အိမ် ၁၁ လုံး ပြိုပျက်သွားခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် အိမ်သုံးဆောင်မှာ လုံးဝ ပြိုပျက်သွားခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ “ လုံးဝ ပြိုပျက်သွားတာ သုံးဆောင်ပါ။ အိမ်ခေါင်းမိုးတွေကို ရှာမရလိုက်ဘူး။ တစ်မိုင်လောက် လွှင့်ပါသွားတယ်။ သုံးဆောင်ထဲက တစ်ဆောင် ခေါင်းမိုးဘဲ ပြန်ရှာရတယ်။ ကျန်တဲ့ ရှစ်ဆောင်က တစ်ဝက်တစ်ပျ
(Credit: ABC) မြန်မာနိုင်ငံသား ​သင်္ဘောအမှုထမ်းနဲ့ ​တရုတ်နိုင်ငံသား ​သင်္ဘောအမှုထမ်းတွေ ​ပါဝင်တဲ့ ​တရုတ်ကုမ္ပဏီပိုင် ​သင်္ဘော ​နှစ်စီး ​ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ​စွန့်ပစ်ခံနေရပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ​မြောက်ပိုင်းက ​သင်္ဘောဆိပ်မှာ ​တရုတ်သင်္ဘော ​၂စီး ​မေလကတည်းက ​စွန့်ပစ်ခံရတာ ​ဖြစ်တယ်လို့ ​Thanhnien ​သတင်းက ​ဒေသခံ ​မီဒီယာကို ​ကိုးကားပြီး ​ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ ​သင်္ဘောပေါ်မှာ ​မြန်မာနိုင်ငံသား ​၁၃ ​ယောက်နဲ့ ​တရု
ဆေးထိုးအပ်ထဲသို့ ဆေးသွင်းနေပုံအားတွေ့ ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) နယူးဒေလီ ၊ သြဂုတ် ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ လူနာ ၆ ဦးအား ဆေးထိုးသတ်ပြီး ၄င်းတို့ ၏ရုပ်အလောင်းများအား ယာတောအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း မြှုပ်နှံထားခဲ့သည့် ဆရာဝန်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ က သြဂုတ်၁၆ ရက်တွင် ပြောသည်။ မကြာသေးမီက ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြသူများအား စုံစမ်းရာမှတဆင့် အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ရှိ Santosh Pol အမည်ရ ဆရာဝန်တစ်
တရားမဝင် အရက် သောက်သုံးမှုကြောင့် ဆေးရုံတွင် တက်ရောက် ကုသနေသည့် အိန္ဒိယ အမျိုးသားများအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- အင်တာနက်) နယူးဒေလီ၊ သြဂုတ် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဘီဟာ အပူပိုင်း ပြည်နယ်တွင် တရားမဝင် အရက်သောက်သုံးပြီးနောက် အနည်းဆုံး လူ ၁၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အဆင့်မြင့် ရဲ အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။ အစိုးရ ဆေးရုံ၌ တင်ထားရသူ ၅ ဦးသည်လည်း အသက်ရှင်နိုင်ရေးအတွက် အသည်းအသန် ကြိုး
စွန်လွှတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို အိန္ဒိယ အနှံ့အပြားမှာ တွေ့ရ အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့က လူတွေ စွန်လွှတ်ရာမှာ မှန်စာ တိုက်ထားတဲ့ စွန်ကြိုးတွေ လည်ပင်းမှာ ငြိမိလို့ ကလေး ၂ ဦး အပါအဝင် လူ ၃ ဦး သေဆုံး ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေလီမြို့မှာ အမိုးဖွင့် ကားပေါ်ကနေ ခေါင်းပြူပြီး လိုက်ပါ လာတဲ့ ၃ နှစ် အရွယ် ကလေးတစ်ဦး လည်ပင်းကို စွန်ကြိုးငြိပြီး သေဆုံးခဲ့သလို တခြား နေရာတစ်ခုမှာလည်း ၄ နှစ် အရွယ် ကလေး တစ်ဦးဟာလည်း
တူရကီမှာ လက်ရှိ အကျဉ်းသား တစ်သိန်း ရှစ်သောင်း ခုနစ်ထောင်ကျော် ရှိနေပြီး ထပ်မံ ဖမ်းဆီးသူတွေနဲ့ မဆံ့မပြဲဖြစ်လာ။ တူရကီ နိုင်ငံမှာ မအောင်မြင်တဲ့ အာဏာသိမ်းမှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့် အကျဉ်းထောင်တွေ ပြည့်လျှံ လာတဲ့အတွက် အရင်က ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်တဲ့ ထောင်ကျ အကျဉ်းသား ၃ သောင်း ၈ ထောင်ကို ရက်မစေ့ခင်မှာ အစိုးရက ခံဝန်ကတိနဲ့ လွှတ်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေမှာ နေရာလွတ် ရှိဖို့အတွ
တူရကီနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကားဗုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုအားတွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ-အင်တာနက်) အန်ကာရာ၊ သြဂုတ် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) တူရကီနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း Diyarbakir ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကားဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ဦးရေသည် သြဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ၈ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း Dogan သတင်းဋ္ဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုအား ကာဒစ် အလုပ်သမားပါတီ (PKK) အစွန်းရောက်အဖွဲ့က ရဲစခန်းတစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် စတင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်ကို ဒီကနေ့ စတင်ပါတယ်။ တရုတ် ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ သွားရောက်တဲ့ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ် အတွင်း တရုတ် သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတို့နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်တွေ လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လည်း ရှိတယ်
ဆီးယင်းသစ်တောကြိုးဝိုင်း ပုဂ္ဂလိက ကျွန်းစိုက်ခင်းတစ်ခု /၂၇-၈-၂၀၁၅ (ဓါတ်ပုံ-Maung Maung Lwin) ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းမြို့နယ် သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်းမှာကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့ အိမ်ခြေ(၃၆၀)ကျော်ကို ချင်းပြည်နယ် အစိုးရကနေ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေဟာ ရေဘေးဒုက္ခသည် အစစ်အမှန် မဟုတ်သလို ဒုက္ခသည်တွေအတွက် နေရာချထားပေးပြီးသားလို့ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ ဒီလိုကျူးေ
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ဘိန်းဘုရင် Guzman အား အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ဖမ်းဆီးလာစဉ်(ဆင်ဟွာ) မက္ကဆီကို ၊ သြဂုတ် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) ထောင်တွင်းအကျဉ်းချခံထားရသည့် မက္ကဆီကိုဘိန်းဘုရင် ဂျိုးအားချင်းဂူစမန် (Joaquin EI Chapo Guzman) ၏ သားတစ်ဦးသည် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Puerto Vallarta မြို့ ၌ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခံလိုက်ရသူ ၆ ဦးတွင် ပါဝင်နေကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်တွင် အတည်ပြုပြောကြားသည်။ မက္ကဆီကို
မွန်ဘိုင်း၊ သြဂုတ်-၁၇ အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းတွင် လူ၆ယောက်ကို သေစေနိုင်လောက်အောက် အလွန်အကျွံဆေးထိုးကာအလောင်းအများစုကို ၄င်း၏ ယာခင်းအိမ်တွင် မြုပ်နှံထားသည်ဟူသောသံသယဖြင့် ဆရာဝန်တစ်ဦးကို အိန္ဒိယရဲများကဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု အရာရှိတစ်ဦး၏ သြဂုတ်လ ၁၆ရက် ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ လူနာတစ်ဦးပျောက်ဆုံးသွားမှုကိုရဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှ လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်ကမဟာ ရပ်ရှထရပြည်နယ် မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့တွင် ဒေသတွင်းမီဒီယာက
ညောင်လေးပင် သြဂုတ် ၁၆ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်လေးပင်မြို့နယ် ပြွန်တန်ဆာမြို့ စံဖဲ ကျေးရွာအနီးတွင် သြဂုတ် ၁၆ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီကျော်ခန့် က ရန်ကုန်-ညောင်လေးပင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်တစ်စီး တိမ်း မှောက်ခဲ့သည်။ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်း ဟောင်း မိုင်တိုင်အမှတ်(၉၅/ဝ)နှင့် (၉၅/၁)အကြား ရန်ကုန်မှ မန္တလေးဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုအေးထိုက် ကတုတ်ဘုရားကြီးကျေးရွာ ဒိုက်ဦးမြို့နေ မောင်းနှင်ပြီး ယာ